काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईले पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा सबै पक्षले इमान्दार हुँदै आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेता भट्टराई​ले फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले स्वीकार गरी २०७५ जेष्ठ २ गते...
उदयपुर : उदयपुरको कटारी–मरुवा खण्डमा सडक कालोपत्रे गरि नसक्दै भत्किएको छ। रातिराति कमसल सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तरहीन काम गरेकोले सडक निमार्ण नसकिँदै उप्किएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। हिजो राति गरेको कालोपत्रे २४ घण्टा नबित्दै उक्किएपछि गुणस्तरहीन काम भएको थाहा पाइएको स्थानीय धीरेन्द्र कोइरालाले बताए। प्रदेश...
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ प्रदेश कमिटीले सरकारसँग व्यवसायीहरुको सुरक्षाको माग गरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष रामजी साहले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि विभिन्न तीन बुँदे माग गरेका हुन्। गत शनिवार राति सिरहाको लहान २३ स्थित...
लहान सुन लुटपाट अपडेटः गाडी र सुन फेला पर्‍यो, लुटेरा फरार
सिरहाको लहानमा सुन व्यापारीको लुटिएको बा १० च ९३०२ नम्बरको कार फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी सुदिप भण्डारीले कार र सुन फेला परेपछि लुटेरा फरार रहेकाले खोजीकार्य जारी रहेको बताए । 'हामीले लहानको बेला भन्ने...
बसमा भेटियो लागुऔषध, एक जना पक्राउ
प्रहरीले काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट नियन्त्रित लागुऔषध ३०० एम्पुल डाइजेपाम, ३०० एम्पुल फेनारागन र ३०० एम्पुल नुर्फिनसहित बारा कलैया उपमहानगरपालिका–४ घर भएका १९ वर्षीय धर्मेन्द्र माझीलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बाराको कलैयाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा३ख ६१४३ नंको...
काठमाडाैं : नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले जननिर्वाचित सांसदको पद प्रचण्डको सनकमा फालिने व्यवस्था नभएको लेखेका छन्। आज फेसबुकमार्फत लामो स्टाटस लेख्दै उनले 'दैलेखजस्तो माओवादी लेखेटिएको' ठाउँबाट आफूले जिते पनि पार्टीले आफूलाई नबुझेको भन्दै पीडा पोखेका हुन्। आज माओवादी केन्द्रले...
पर्साका कोरोना संक्रमितको भरतपुरमा मृत्यु
२९ मिनेट अघि अनलाईन खबर
३० चैत, चितवन । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका २ का ५५ बर्षीय कोरोना संक्रमित पुरूषको उपचारको क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । आइतबार विहान १ बजे भरतपुर अस्पतालमा आएका उनको कोभिड आर्इसीयूमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका फिजिसियन डा. प्रमोद...
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को चौँथो खेलमा पञ्जाब किंग्सले राजस्थान रोयल्ससामु २ सय २१ रनको विशाल प्रस्तुत गरेको छ । २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा पञ्जाबले २ सय ०० रन बनाएको हो । पञ्जाबका लागि कप्तान केएल राहुले सर्वाधिक ९१...
पुलिसलाई पन्छाउँदै एपीएफ सेमिफाइनलमा
३० चैत, विराटनगर । विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै एपीएफ क्लब छैटौं संस्करणको विराट गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार भएको तेस्रो क्वार्टरफाइनल खेलमा विभागीय टोली एपीएफले पुलिसलाई २-० गोल अन्तरले हरायो । एपीएफको जीतमा मणि लामा...
सिरहाको लहानमा गाडीसहित लुटेराले सुन लुटे
सिरहाको लहानस्थित व्यवसायी राजेश सारडाको सुन पसलबाट लुटेराहरूले सुन लुटपाट गरेका छन् । लुटेराको समूहले राजुको गाडीसमेत लगेको बताइएको छ । लहान प्रहरीका अनुसार राजेशको घरमा भएको सुनसहितको लकर उनकै गाडीमा राखेर लगेको जनाएको छ । कसले सुन लुट्नेको अहिलेसम्म...
विराटनगर : विराट गोल्डकपको सेमिफाइनलमा नेपाली पुलिस क्लबलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ प्रवेश गरेको छ। विराटनगरस्थित सहिद रंगशालामा जारी छैटौँ संस्करणको विराट गोल्ड कपको सोमबार भएको तेस्रो क्वार्टरफाइनल खेलमा नेपाली पुलिस क्लबलाई २–० गोलले हराउँदै एपिएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पहिलो...
प्रचण्डप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य : ए दाइ, प्रधानमन्त्री भइदेउ न !
४८ मिनेट अघि अनलाईन खबर
३० चैत, काठमाडौं । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न सोमबार दिउँसो राष्ट्रियसभा गृह पुगेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई हँसिमजाकको पात्र बनाए, व्यंग्य...
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सूचीकृत ५ अर्ब ६१ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य रु. ५५१ अर्ब ६८ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठ महिनासम्ममा रु. १ खर्ब ५० अर्ब बराबरको विकास...
सरकार चालु खाता रु.१४८ अर्ब ६८ करोडले घाटामा
सरकारको चालु खाता रु.१४८ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.११९ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय...
माओवादीनिकट निजामती कर्मचारीको घोषणापत्र, यस्ता छन् ३९ बुँदे माग (प्रेस विज्ञप्तिसहित)
काठमाडाैं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारसमक्ष विभिन्न ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ। यही चैत्र २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको चौथो केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट पारित भएका विभिन्न ३९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रसमेत आज सार्वजनिक गरेको छ। आज...
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.७० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.८० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको...
काठमाडौं । राप्रपा निकट नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले योगी पुष्पराज पुरुषलाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । पुरुष यसअघि पनि सो संगठनका अध्यक्ष रहिसकेका छन् । देशभरका ६७ जिल्लाबाट...
३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोरीमा रोकिएको हुलाकी सडकको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ठोरीबाट काठमाडौं आएको एक प्रतिनिधि टोलीले सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर हुलाकी सडक निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग...
गल्ती सच्याऊँ, सबै जुटेर एमालेको बहुमत ल्याउन कसम खाऊँ : योगेश भट्टराई
नेकपा एमालेका युवानेता योगेश भट्टराईले सबैले आफ्नो गल्ती सच्याएर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार ‘आलोचना र आत्मालोचना बारे’ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले सर्वप्रथम ०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई...
खानपानमा ध्यान नदिंदा इम्यूनिटी पावरमा कमी आउँछ । खानपानमा विशेष ध्यान दिंदा इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार इम्यूनिटी पावर बढाउनका लागि खानामा केही विशेष परिकार समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यी ७ चीज, जसले इम्यूनिटी पावर...
पूजा गर्दा धूप बाल्ने प्रथा सबै धर्ममा विद्यमान छ । किन बालिन्छ त धूप ? कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ ? खासमा धूपको धूँवाले घरको नकारात्मक ऊर्जालाई नष्ट गरिदिन्छ । यो धूँवाले वातावरण पवित्र र शुद्ध हुन्छ । त्यसैले कुनै कुनै...
मोटोपनका कारण तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस्, घरभित्रै यसको औषधी पाइन्छ । मोटोपनलाई कम गर्नका लागि भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तुहरू नै लाभदायक हुन्छन् । दालचिनी:आयुर्वेदमा दालचिनीको प्रयोग कीटाणुनाशक, दुखाइको कम गर्न प्रयोग गरिन्छ । दालचिनी वजन कम गर्नको...
आँखा शरीरको महत्वपूण अंग हो । आँखाका कारण हामी पूरै संसार देख्न सक्छौं । आजकलको व्यस्त जीवनसैलीमा आँखाको सहायताबाट हामीले सवै काम चलाउन पर्ने हुन्छ । मोबाइल, ल्यापटपमा दिनभर आँखाले जोर दिदै काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तोमा आखामा...
आजकलको व्यस्त जीवनशैलीमा दिमागलाई अत्यधिक भार पर्छ । यसैले गर्दा धेरै मानिसको दिमाग कमजोर हुन थाल्छ । दिमाग कमजोर भएपछि स्मरणशक्ति पनि गुम्ने नै भयो । तपाईंमा यो समस्या छ भने यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुस् । भिजाइएको बदाम प्रत्येक...